Aiza ny Mickey-ko, ny lalao Disney farany ho an'ny iPhone | Vaovao IPhone
Aiza ny Mickey-ko, ny lalao Disney farany ho an'ny iPhone
Nacho | | Lalao IPhone
Aiza ny ranoko? ary Aiza ny Perry-ko? Nisy lalao roa novolavolain'i Disney izay nahomby tamina App Store. ny gameplay tsotra nefa mampiankin-doha nahavita nanantona ny tanora sy ny antitra, ny fanaovana ireo lalao ankamantatra ireo dia teo an-tampon'ny tabilao nandritra ny herinandro maro.
Araka ny nolazain'izy ireo, raha misy zavatra mandeha dia tsara kokoa ny tsy hikasika azy. Io filozofia io no manome valiny tsara amin'i Disney satria miverina mamerina ny fahombiazana miaraka aminy izy fizarana fahatelo amin'ity saga ity izay kintana Mickey Mouse.
Amin'ny andro fahavaratra mafana dia nanapa-kevitra i Mickey fa hametraka fitoeran-drano voasarimakirana. Manana siny, voasarimakirana ary mpanjifa mangetaheta lava izy… Fa tsy manana rano izy! Ampio i Mickey hahazo rano ary, ho fahafinaretana bebe kokoa, kintana telo isaky ny haavo. Na ny kintana aza dia mihetsika!
Mitovy tanteraka ny filalaovana. Ny iraka ataontsika dia ny alao ny rano hangonin'i Mickey ary ho an'izay dia mila manisy tsipika eo amin'ny efijery isika hanamarihana ny làlana tiantsika harahina. Rehefa mandroso isika, dia mihasarotra hatrany ny haavony ary misy ireo singa hisehoana fifandraisana toy ny sehatra, rahona, fantsona ary maro hafa.
Raha haingana isika mamita ny ambaratonga tsirairay ary manangona rano betsaka araka izay tratra, dia hahazo ny isa ambony indrindra isika izay kintana telo. Ny kintana dia manampy antsika hanokatra ambaratonga sarotra kokoa izay hijanona ho voahidy amin'ny fiandohan'ny lalao.
sokajy misy ambaratonga 100 azo ampifaliana mandritra ny ora vitsivitsy. Manantena aho fa ny politika amin'ity lalao ity dia mitovy amin'ny an'ireo toko roa hafa ary ny toko vaovao dia hanampy tsy misy vidiny amin'ny fanavaozana ho avy.
Na izany aza, misy zavatra roa momba ny Aiza ny Mickey-ko? fa tsy dia tiako loatra. Ny voalohany dia ny fidirana amin'ny haavon'ny toko roa farany dia ilaina ny mandany 0,89 euro fanampiny. Ny fanoherana faharoa dia ny mifanohitra amin'ny hoe Aiza ny ranoko? sa Aiza ny Perry-ko? Aiza ny Mickey-ko? tsy lalao iraisan'ny rehetra io, manery ny mpampiasa hividy kinova ho an'ny iPad izay mampiakatra ny vidiny ho 1,79 euro ihany koa.
Raha tsy olana ireo tsy fahampiana roa ireo, Aiza ny Mickey tiako no tianao satria mampiankin-doha toy ny fizarana roa teo aloha ihany io.
Fanazavana fanampiny - Aiza ny Perry-ko? manampy 20 ambaratonga vaovao amin'ny kinova 1.5.0
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Aiza ny Mickey-ko, ny lalao Disney farany ho an'ny iPhone
John_Doe17 dia hoy izy:
Hitako ho sangisangy ny rafitra Disney ho an'ny lalao, fa tsy hamoaka ireo ambaratonga ireo ho an'ny Aiza ny ranoko? Izy ireo dia mamoaka lalao zokiny 2 izay manova ny mpilalao fototra amin'ny mekanika mitovy ihany ary manome vola anao ho an'ny tsirairay amin'izy ireo.
Mamaly an'i John_Doe17
Nacho dia hoy izy:
Izany no ataon'i Rovio amin'ireo Angry Birds ary faly ny olona. Miarahaba anao!
Valiny tamin'i Nacho
Toa tsy mety ihany koa izany amiko. Na dia ao anaty ny ratsy aza dia mahita fiovana bebe kokoa eo amin'ny Star Wars sy ny tany am-boalohany noho ireo. Manana Angry Birds aho fa ireo izay maimaim-poana atolotra dia toa tsy ilaina. Ary ny iray amin'ity lahatsoratra ity dia tsy eritreretiko intsony satria tsy fananako izany dia tsy fantatro raha mbola mandray ambaratonga voalohany ihany izy ireo.
Vao tsy ela akory izay dia nanavao ny roa, ny Perry ary ny voay. Ny tsy tiako dia izao dia tsy iraisan'ny rehetra izao ary ambonin'izany dia mitaky indroa avo roa heny ny iPad ... ka diso lalana izy ireo araka ny voalazanao. Miarahaba anao!
JUAKIN dia hoy izy:
IZAY LAZAINO IZAY LAIN'NY NACHO
Valiny amin'i JUAKIN
Valeria dia hoy izy:
JUAKIN IZAO dia toa JOKOA
Valiny amin'i VALERIA
FABIANA dia hoy izy:
TOA toa ahy ny vazivazy IZAO dia ny mijery ny sary na ny milalao azy.
Valiny amin'i FABIANA
AuVe dia hoy izy:
Misy mahalala ve izay lazain'i Mickey isaky ny faran'ny ambaratonga tsirairay?
Valio amin'i AuVe
Lenny dia hoy izy:
Tiako ho fantatra ihany koa izay lazain'i Mickey Mouse isaky ny faran'ny ambaratonga tsirairay ... GRX !!!
Valiny tamin'i Lenny
Google Earth dia nohavaozina miaraka amin'ny fanovana endrika sy Street View
Ny iOS 7 dia mandrindra ny fifandraisana amin'i Google indray